Ogaden News Agency (ONA) – Weerar Ka Dhacday Dalka Canada oo Khasaare Gaystay.
Weerar Ka Dhacday Dalka Canada oo Khasaare Gaystay.
Labo ruux oo mid ka mid ah uu yahay ninkii hubaysnaa iyo haweenay da’yar ayaa dhintay 13 ruux oo kalana dhaawac ayaa soo gaadhay kadib toogasho ka dhacday magaalada Toronto, sida uu sheegay booliiska dalka Canada.
Toogashadan ayaa ka dhacday agagaarka Danforth iyo Logan habeennimada Axadda ahayd. Dadka dhaawaca ah waxaa ka mid ah gabadh yar, waxaana xaaladdeeda lagu sheegay mid aad u liidata, booliiska ayaa dalbanaya dad goobjoogeyaal ah.
Qaar ka mid ah dadkii dhaawaca ahaa ayaa lagu daweeyay isla goobtii, halka kuwo kalana loola cararay isbitaallo ka ag dhaw goobta weerarku ka dhacay, ma cadda wali ujeedada laga lahaa toogashadaas khasaaraha gaystay.